Al-Shabaab oo weerar kale ka geystay Gudaha Dalka Kenya | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Al-Shabaab oo weerar kale ka geystay Gudaha Dalka Kenya
Al-Shabaab oo weerar kale ka geystay Gudaha Dalka Kenya
Wararka laga helayo Magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa waxaa ay sheegayaan in Al-Shabaab weerareen Saldhig ay ku sugna yihiin Ciidamada Booliska Kenya, kaas oo ku yaalla duleedka Magaaladaas.
Weerarkaas oo dhacay saacado kadib markii Al-Shabaab ay weerareen Bas ay saarnaayeen dad rayid ah oo ka baxay Magaalada Mandheera kuna sii jeeday Magaalada Nairobi, weerarkaas oo uu ka dhashay khasaaro dhaawac ah.
Dagaal u dhaxeeyay Ciidamada Booliska Kenya & Xubnaha weerarka fuliyay ee ka tirsan Al-Shabaab ayaa ka dhacay Saldhiga la weeraray oo ku yaalla deegaanka 50-ka ee hoostaga degmada Qorof Xaraar ee Magaalada Wajeer.
Dadka degaankla uu weerarka ka dhacay ayaa waxaa ay bilaabeen qaarkood inay barakacaan, waxaana warbaahinta ay u sheegeen inay dareemeen cabsi ku aadan inay waxyeelo kasoo gaarto dagaalka.
Al-Shabaab oo ka hadlay weerarkaas waxaa ay sheegeen inay khasaaro ku gaarsiiyeen Ciidamada booliska Kenya oo ay ku weerareen saldhiga Ciidan oo ku yaalla duleedka Magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Waa weerarkii labaad oo muddo 24 Saacadood gudahood ay Al-Shabaab ka gesytaan Gudaha Kenya, waxaana jirtay weerar ay ku qaadeen in gaari Bas ah oo ka baxay Magaalada Mandheera kuna sii jeeday Magaalada Nairobi, weerarkaas oo ay ku dhaawacmeen 8 ruux oo rayid ah oo Afar kamid ah xaaladooda liidato.
Maxaa looga hadlay Shirka Midowga Afrika ee ka soconaya Addis Ababa?
DHAGEYSO:-Warka Habenimo Radio Baidoa 14-10-2021
Qaar kamid ah Goobaha Gancsiga Guriceel oo xiran
Soomaaliya & QM oo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka
Dowladda Uganda oo Ciidamo horleh leh u soo direysa Somalia